Las Vegas မှ - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: Las Vegas မှ
Tag Archives: Las Vegas မှ
အနီရောင်ပျားမီဒီယာ NAB ပြရန် 2018 မှာပြိုင်ဘက်ကင်းမီဒီယာအတွေ့အကြုံများကိုရည်ညွှန်းပြသ
အနီရောင်ပျားမီဒီယာ, ယခင်က Ericsson ကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ, ယခုလွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အ Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး (Booth #SU2018MR) တွင် NAB ပြရန် 11625 မှာ၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အစုစုကိုပြပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအာရုံစိုက်ဒီနှစ်အားကစားအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောအာရုံနှင့်အတူ Asr (အလိုအလျောက်ခွန်းအသိအမှတ်ပြု), နှင့်အကြောင်းအရာ Discovery န်းကျင်အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနဲ့, Access ကိုန်ဆောင်မှုများအပေါ်ပါလိမ့်မည် ...
NAB 2017 - Ikan ဂတ်စ်မှသွား
သငျသညျ NAB 2017 တက်ရောက်ရန်ခဲ့သလား ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နှင့် 103,443 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေကိုပြု၏, သငျသညျတက်ရောက်ရန်နိုငျကွလျှင်ဤပြန်လည်စုစည်းမှုသင်လွဲချော်သောအရာကိုအပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးနှငျ့သငျ Vegas မှာယခုနှစ်ပြပွဲကနေ Ikan ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့သေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးတဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းတစည်းခဲ့ ...
NAB 2017: မီဒီယာစက်မှုဝန်ကြီး Arvato စနစ်များနှင့် ANNOVA စနစ်များပစ္စုပ္ပန်ဆန်းသစ်, ဆုရဖြေရှင်းနည်းများ
SU2017 ကိုလည်းမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများသည် joiz ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ, make.TV, HMS မီဒီယာ Solutions နှင့် plantri ဧပြီလ 5115, 20 အိမ်ရှင်အဖြစ် Arvato စနစ်များနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း ANNOVA ပစ္စုပ္ပန်အစွမ်းထက် software ကိုဖြေရှင်းချက်•ရပ်: မီဒီယာပညာရှင်များ NAB 2017 •များအတွက်အိုင်တီပညာရှင်များ (Arvato စနစ်များ) Gütersloh - ကြွေးကြော်သံနှင့်အတူ Arvato စနစ်များနှင့်မိတ်ဖက် ANNOVA "အကြောင်းအရာ & ပြည်သူ့ချိတ်ဆက်ခြင်း '' ...
Ericsson က NAB ပြရန် 2017 မှာတီဗီပြောင်းလဲ
Ericsson က (NASDAQ: Eric) content တွေကိုပိုင်ရှင်တွေ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် TV ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရန်၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အစုစုကိုပြ, Las Vegas မှာ, နီဗားဒါး (#SU2017) တွင် NAB ပြရန် 720 မှာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုနှင့်အသစ်ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားအသွင်ပြောင်းရန်၎င်း၏မစ်ရှင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Ericsson ကသုံးသော့ချက်ဒေသများရှိအသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်: မီဒီယာသန့်စင်, မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပို့ဆောင်မှုနှင့်မီဒီယာ ...
သင် seen'em ပါတယ်ငါသိ၏ - သူတို့ကိုအထဲမှာအပြည့်အဝထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုနှင့်အတူ super-ကြီးမားသော semi ... ထိုသူတို့ကစံဗန်အရွယ်အစား (သင့်ဒေသခံ affiliates ရှိသည်) တွင်လာပေမယ့်, ငါသည်အရာရာ၌သင်တို့ကိုလက်တွေ့ကျကျနထေိုငျနိုငျသူမြားကိုအကြောင်းပြောနေတာပေါ့ - အတူငယ်များစတူဒီယိုနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ၏ပင်အချို့အပေါငျးတို့သခေါင်းလောင်းထိုးနှင့်စီများမှုတ်ရုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး! ဤရှိပါတယ် ...
THE BRANDERY LA က BRANDVOLTA ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြေညာ
BRANDVOLTA CA. , အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကျော်လွန် Los Angeles မြို့တိုးချဲ့ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် - မေလ 02, 2016 - အ Brandery LA ကစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်ကျယ်ပြန့်အထိအပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်မှာ Los Angeles မြို့အခြေစိုက်ဘက်ကဖန်တီးမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ BrandVolta မှ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲပစ်အသစ်တစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်အသစ်တစ်ခုကိုကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြောင်းလဲမှုကုမ္ပဏီ၏ထင်ဟပ် ...
#NABShow: 2016 NAB Show မှာနေ့တစျခု
တိုက်ရိုက်ဘလော့ခ် - THE SHOW တွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှတစ်နေ့တာလုံးအဆက်မပြတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ !!! ဘာမှအဆိုပါ 2016 NAB ပြရန်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သလား? ကျွန်တော်သံသယဖြစ်နေတယ်!!! သွားကြဖို့ raring !!! - အဆိုပါအသံလွှင့်သင်္ဘောသားတက်က rip များမှာ Beat ပထမဦးဆုံးအမှုအရာများသည်အရင်သို့သော် - ရဲ့ကဤဘူးသီးနဲ့ switches နှင့်အတူ fiddle ပါစေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှရနိုငျသောအရာကိုတွေ့မြင် ...
Vegas မှာတီဗီ Pro ကိုဂီယာရဲ့ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ Flypak ™အညွန့် PAL အဖြစ်အပျက်
Las Vegas မှ, NV- ဇူလိုင်လ 12, 2015-TV ကို Pro ကိုဂီယာမကြာသေးမီကငါးခု Panasonic က AK-HC3800 နှင့် AJ-PX800G ကင်မရာများနှင့်အတူ Ross ကပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းကာဗွန်ဖိုက်ဘာ Flypak ™သုံးပြီး Professional က Armwrestling အဖွဲ့ချုပ် (PAL) ပစ်သတ်။ အဆိုပါပြိုင်ဆိုင်မှုကို USA, ကနေဒါ, ယူကရိန်းနှင့်ပိုလန်တို့မှပြိုင်ဘက်တိုက်ဖျက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်ဘယ်မှာ Las Vegas မှာ '' ခက်ရော့ခ်ဟိုတယ်, အတွင်းအပြင်, ကလပ်ဗီနိုင်းမှာအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ၌ဤရုပ်မြင်သံကြားကနေ "Vendetta ...
Pamela Kleibrink Thompson က, အလုပ်ခန့် / ကို Creative အလုပ်ရှာဖွေရေးနည်းပြများနှင့်အသံလွှင့် Beat စာရေးဆရာများကကက်ထရီနာစိန်, စျေးကွက်, ProductionHUB ၏ဒါရိုက်တာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ကက်ထရီနာစိန်, စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာ ProductionHUB, Pamela Kleibrink Thompson ကအတူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, အလုပ်ရှာဖွေရေး Navigator ကက်ထရီနာစိန်, ProductionHUB များအတွက်စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာ ProductionHUB သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းအချို့အတွေးအခေါ်များ shared နှင့် Pamela Kleibrink Thompson က, အလုပ်ရှာဖွေရေး Navigator နှင့်အသံလွှင့်ဘိအဘို့အစာရေးဆရာနှင့်အတူ NAB သွားရောက်လည်ပတ်။ ProductionHUB ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုလာစေပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့အွန်လိုင်းဈေးသည် ...
Lisa ကို Wood က, Pamela Kleibrink Thompson က, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, အလုပ်ရှာဖွေရေးနည်းပြများနှင့်အသံလွှင့် Beat စာရေးဆရာအားဖြင့် ComputerWise ကွန်ပျူတာ Inc ၏ပိုင်ရှင်ထံမှ NAB ပြရန်သိကောင်းစရာများ
Lisa ကို Wood ကသူမ၏ခင်ပွန်း Curtis နှင့်အတူ Pamela Kleibrink Thompson က, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, အလုပ်ရှာဖွေရေးနည်းပြများနှင့်အသံလွှင့် Beat စာရေးဆရာ Lisa ကို Wood က Co-ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ, ComputerWise ကွန်ပျူတာ Inc မှအတူ NAB ပြရန်အဘို့အ Logan, Utah အခြေစိုက် ComputerWise ကွန်ပျူတာ Inc ၏ပိုင်ရှင်ရှယ်ယာအကြံပေးချက်များ, အဘယ်သူကိုမှသူမအထက်တန်းကျောင်း (38 နှစ်) ကတည်းကလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Logan, Utah အခြေစိုက်, 1981 ကတည်းကသူတို့ NewTek ပါပြီ ...